DHAGEYSO: Guddiga Iskaashatada Gaadiidleyda gobolka Banaadir oo la kala diray (Ogow Sababta) – HalQaran.com
DHAGEYSO: Guddiga Iskaashatada Gaadiidleyda gobolka Banaadir oo la kala diray (Ogow Sababta)
Muqdisho (Halqaran.com) – Maamulka gobolka Banaadir ayaa wareegto uu Isniinti maanta ah soo saaray waxa uu ku kala diray guddiga iskaashatooyinka gaadiidlayda gobolka Banaadir, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku milmeen waxa loogu yeero argagixisada.
Wareegtan oo kasoo baxday xafiiska duqa magaalada Muqdisho oo la ogeysiiyay Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Wasaaradda Gaadiidka, Wasaaradda Arrimaha Gudaha , Taliska Nabadsugida Gobolka Banaadir iyo xafiiska Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaraha ayaa lagu kala diray Guddiga iskaashatada Gaadiidleyda gobolka Banaadir.
Wuxuu kaloo sheegay, afhayeenku in Maamulka Gobolka Banaadir ay soo Magacaabi doonaan Guddi kale oo ah Iskaashatada Gaadiidleyda gobolka Banaadir, kuwaas oo baaritaan ay ku sameyn doonaan Hay’adaha Amniga Soomaaliya.
Ugu dambeyn, xubnaha guddiga Iskaashada Gaadiidleyda gobolka Banaadir weli wax jawaab ah kama bixin go’aanka Maamulka gobolka Banaadir uu ku kala diray iyo eedeynta loo jeediyay oo ah inay ku dhex milmeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Tags: Guddiga Iskaashatada Gaadiidleyda gobolka Banaadir, kala dirid, ku milmid Al-Shabaab
Fanaanadii caanka aheyd ‘Saynab Xaaji Cali Baxsan’ oo Muqdisho ku geeriyootay